Tag: nkịrịka mkpuchi | Martech Zone
Mkpado: ihe na -eche nche
Ahịa gị ọ Iwu akwadoghị?
Monday, August 30, 2010 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Attorney David Castor, onye ọka iwu na-ahụ maka mbido na azụmaahịa SaaS, zitere m ozi na ngwụsị izu na akụkọ na FTC ejirila onye mbụ metụtara iwu nkwupụta ọhụụ. Dịka akụkụ nke mmezi a chọrọ (PDF), ụlọ ọrụ PR Reverb Communications na onye nwe ya bụ Tracie Snitker ga-ewepụ nyocha iTunes ọ bụla ndị ọrụ Reverb dere dịka ndị ahịa nkịtị na ndị gosipụtara igosipụta mmekọrịta dị n'etiti Reverb na egwuregwu ya.
Anyị Hụrụ onye ọka iwu taa
Fraịde, Septemba 5, 2008 Tuesday, June 25, 2019 Douglas Karr
Ọ bụghị ihe ọjọọ. Kwa izu, n'ihi na ihe karịrị otu afọ, M nwere a na-echetara site 43 ihe na-amalite a Ọma Business. Nke ahụ bụ iwu dị ogologo! Ibido azụmaahịa bụ otu ihe, ịme ya nke ọma bụ ihe ọzọ. Enweela m ihe ịga nke ọma na blọọgụ ahụ ma ana m aga n'ihu na-enweta mgbakwunye ndị ọzọ n'ihi blọgụ ahụ. Nke a urua, M mechiri 2 ịrịba contracts, ma ogologo okwu na tọn